Njani ukuba yi-Couch Potato kuya kumnceda u-Olivia Taylor Dudley's Career - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa Inkwenkwezi ye-TV u-Olivia Taylor Dudley yiPatato yesiqhekeza enekratshi-Nantsi indlela eya kumnceda ngayo kwikhondo lomsebenzi
UOlivia Taylor Dudley.UKaitlyn Flannagan woMqwalaseli; Wadutyulwa kwindawo ekuluhlu lweQela le-Fabrikant le-Triplemint kwi-45 East 25th Street 29C
U-Olivia Taylor Dudley ngumdlali weqonga obalaseleyo kunye nefantasy / sci-fi nerd. Wayefundiswe ekhaya ukusuka kwibanga lesixhenxe ukuya kwele-10 kwaye wayejonga inkolo yakhe kwifilimu nakumabonwakude. Ebethanda Ndibize Ngegama Lakho , kodwa ngelishwa uye wawa ngasemva Imidlalo yeethrone .
Ngokwenene, ungumthengi wenkcubeko yanamhlanje (ngaphandle kokungabikho kumhla GoT . Fika kuloo nto, Olivia).
Sithanda ukukhalela indawo yanamhlanje yaseHollywood ngenxa yokusebenziseka kwayo kunye nokungabikho kwesiqalo. Umrhumo ngamnye, siyakhalaza, uziva ngathi ubekwe ndawonye ngumgaqo wendibano wabaphathi be studio abagalela amaphepha edatha kunye nolwazi lwedemokhrasi.
Mhlawumbi iyeza lolu luvo lomxholo ovavanywe kwangaphambili kwimarike yidosi yokuthandeka okudala, nto leyo enokubonelelwa nguDudley njengoko eguqukela ekuveliseni.
Umdlali oneminyaka engama-32 waziwa kakhulu ngendima yakhe njengoAlice Quinn kwiSyfy's Amagqirha , Kodwa ngokungafaniyo nabanye kolu shishino, eneneni ungumlandeli wazo zonke izinto zokuzonwabisa. Ujikeleza phakathi kokuphakama kwe Iintloni kumthandayo Abahlobo uphawu (Chandler). Uchukumisa ubuchule kunye nobubi bokuhlekisa ngokuchasene nomdlalo weqonga kunye ne-Superman nerdom.
Ekupheleni kodliwanondlebe lwethu, inye into icace gca: UDudley ngokwenene umba imiboniso bhanyabhanya kunye nomabonwakude.
Ndiyayithanda iTV. Ndingahlala ndibukele umabonwakude kunye neemovie yonke imihla, uxelele uMbonisi. Ngokwenene konke endikwenzayo xa ndingasebenzi. Kwaye ndisemva, kuyakhathaza kakhulu.
Ewe, ngokungathandabuzekiyo, uOlivia, andinakukwazi ukugxininisa ngokwaneleyo ukuba kufuneka ubanjwe kangakanani Imidlalo yeethrone .
Kodwa kunye neshedyuli yeenyanga ezintandathu zokudubula Amagqirha kunye nomsebenzi ozayo wokuvelisa kunye nabazalwana bakaRusso (uyazi, abafana abasemva kweminyaka elishumi yokwenziwa Abaphindezeli: Imfazwe engapheliyo , akukho nto inkulu), kuyaqondakala ukuba kutheni udlala ngasemva.
Ubumnandi bukaDudley buquka konke, busuka kwimidlalo yeqonga elibonwa kancinci kwimicimbi ephambili. Ukukhetha kwakhe kumnika indawo phantse kuzo zonke iincoko zenkcubeko kunye nesiseko solwazi kwibhodi yaseHollywood. Kukusebenza okungafaniyo okumsebenzela kakuhle njengomdlali weqonga kunye nomvelisi.
Ndiyawathanda amabali alula, okwenyani. Ndicinga ukuba yiyo loo nto ndithanda Ndibize Ngegama Lakho kakhulu, uthe. Ndingathanda nje ukubalisa ibali elisondeleyo malunga nabantu ababini, endiza kuthi ndiyenze kwimovie endiyivelisayo. Libali elincinci kakhulu. Ndizithanda izinto ezilula nezihambayo kwaye ziyinyani
Ndiyathetha, kuya kuba mnandi ukuba yincutshe enkulu nayo, ke, uyikhuphe. Ndizakwenza iMarvel, wongeze watsho.
Ukuhambisa ishishini ngamabali anomdla, njengefilimu yakhe ezayo ICanary , Kwaye ukubanceda baxhume ukusuka kwiphepha ukuya esikrinini kunika uDudley inkululeko engakumbi kwishishini elaziwayo ngezivumelwano eziqinileyo. Ikwenza ukuba alule izihlunu zakhe ngokuyilayo, eyinxalenye enkulu yesibheno.
Kuhle ukuba nolawulo oluncinci, kwaye ndiyazithanda iimovie kwaye ndiyakuthanda ukwenza ifilimu kakhulu, ke ayisiyiyo yonke into yokundenzela, wachaza. Ukufumana isandla kuwo onke amacandelo ahlukeneyo yinkqubo yoyilo elungileyo kum. UOlivia Taylor Dudley.UKaitlyn Flannagan woMqwalaseli; Wadutyulwa kwindawo ekuluhlu lweQela le-Fabrikant le-Triplemint kwi-45 East 25th Street 29C
Umboniso luthotho oluthandwa kakhulu nguSyfy kuzo zombini phila ababukeli kunye nabanqwenelekayo abali-18 ukuya kuma-49 kubemi, nangona isencinci noko iyonke. Amagqirha Nangona kunjalo, incede ukuqondisa iparadigm yombukeli ejikeleze iSyfy kude Sharknado kwaye ngakumbi kumdlalo ohloniphekileyo.
Ngeli xesha lePeak TV eliza kubona inani lodweliso olungaphezulu kwe-500 kulo nyaka, lonke uthungelwano lufuna i-niche. Ngelixa ubudenge obungaqondakaliyo be Sharknado Kumnandi ngendlela eyohlayo, Amagqirha ikhuthaza ukholo ngakumbi ngakumbi kuyilo.
Kunika umdla ukubona ukujika [kweSyfy] kule minyaka imbalwa idlulileyo, utshilo uDudley. Ndiyacinga Amagqirha uyincedile ukuba ingene kumakhaya amaninzi, kwaye sifumana abaphulaphuli ababhinqileyo abakhulu kunayo nayiphi na eminye imiboniso, enika umdla ngokwenene.
Wongeze wathi: Sinabo bonke aba bafazi banamandla, abakrelekrele kumdlalo omele abasetyhini bokwenyani, kwaye ndicinga ukuba loo nto yenze utshintsho kwi-Syfy… Benza izinto ezimangalisayo phaya.
Njengoko besitsho Umhlaba weLa La , Abantu bathanda into abanye abantu abayithandayo. Uthando lukaDudley luyacaca ngokucacileyo imiboniso bhanyabhanya kunye neemovie. Ungumlingisi kunye nomvelisi, kodwa ukwangumlandeli kunye neetapile zesingqengqelo. Ndiyathemba ukuba, lonke olo thando luyangena emsebenzini wakhe ozayo.
Ukuhanjiswa yinto, akukho nto ibhetele kunoko, utshilo.
I-Tesla Turmoil: Abacebisi beProxy bafune ukukhupha uSihlalo weSihlalo oThathe indawo ka-Elon Musk
Marvel Superhero Artist Herb Trimpe, 'Bawo' waseWolverine, Usweleke eneminyaka engama-75
Amabali amafutshane kaMary South angena kwiiKona eziMnyama ze-Intanethi
Esona sihlalo sihle seofisi seentlungu ezisezantsi
I-cologne efanelekileyo etsala abantu ababhinqileyo
yenze malini iimfazwe zeenkwenkwezi ezinamandla azenzayo
I-omaha steaks john galt blvd
ungayenza njani into yokubuyisela umva kwifowuni simahla